रिजल्ट देखिने गरी काम गर्न मन्त्रीको निर्देसन
August 3, 2017 सम्पादक न्युज
भक्तपुर । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका आयोजना तथा डिभिजन प्रमुखहरुलाई प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
भक्तपुरको नगरकोटमा बुधबार सुरु भएको आ.व. २०७३/ ७४ वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आ.व. २०७४÷७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी गोष्ठिीमा बोल्नुहुँदै मन्त्री साहले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो । उहाँले यस्ता विचार गोष्ठि भेटघाटका लागि मात्र हुन नहुने भन्दै यसले विकासका कार्यमा भइरहेका ढिलासुस्ती रोक्न सफल हुनुपर्ने बताउनु भयो । यस किसिमका विचारगोष्ठि भेटघाट र झारा टार्ने खालको हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले ती बिचार गोष्ठिहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भायो । त्यसैले यो विचार गोष्ठिलाई जनताको पक्षमा हुने गरी छलफल चलाएर एउटा निस्कर्ष निकाल्न र त्यसलाई व्यवहारमा रुपन्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बदलिँदो परिस्थितिमा चुनौतिहरु रहेको उल्लेख गर्नुहुदै मन्त्री साहले सोच र कार्यशैली बदलेमा सफल हुन सकिने बताउनुभयो । लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले किन यस्तो भयो समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो । तोकिएकै समयमा कार्यहरु सम्पन्न हुन नसकेको कारण खोज्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई रहेको थियो । ‘समयमै ठेक्का सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार दोसी छ नै संगै ठेकेदारलाई नियमन गर्ने को हो ? उसको दोस हुने कि नहुने ?’ मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘अब सोलोढोलो र घुमाउरो कुरा गरेर हुदैन ।’
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्य प्रकृति बढी समन्वयात्मक हुने भएकाले प्रभावकारी रुपमा समन्वय भए सफलता मिल्ने उहाँको भनाई रहेको थियो । अन्तर्निकाय समन्वय प्रभावकारी रुपमा भएका कार्यक्रमहरुमा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन भएको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
आफूले अब पारदर्शितालाई जोड दिने उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले भन्नुभयो त्यसका लागि मन्त्रालयका गतिविधिहरुलाई वेवसाइटमा राख्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागि डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘अब पारदर्शितालाई जोड दिइन्छ, सबै विवरणहरु वेवसाइटमा राखिनेछ । ‘समयमा कार्य सम्पादन नहुदा जनताले के सोच्छन् ?’ मन्त्री साहको सहभागिहरुलाई प्रश्न थियो । जनताले कति दुःख गरेर कति कष्ट गरेर, संघर्ष गरेर योजना लगेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायको लापरवाहीका कारण ढीला हुनु दुःखद भएको उहाँको भनाई रहेको थियो ।
कामको आधारमा मूल्यांकन हुने भन्दै मन्त्री साहले त्यसैको आधारमा समयमै सरुवा बढुवा हुने भएकाले अनुनय विनय गर्नुको औचित्य नभएको बताउनु भयो । ‘सहरी विकास मन्त्रालयमा कामका आधारमा सरुवा बढुवा हुन्छ’ मन्त्री साहले भन्नुभयो ‘तपाँईहरुको मूल्यांकन तपाईहरुकै कामका आधारमा हन्छ ।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा पूजिगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने बताउनुभयो । विभागको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले सहरी विकासको सन्दर्भमा समेत कार्य गर्नु सजिलो नभएको बताउनु भयो । ‘अब जनताले एक छिन पनि नपर्खने अवस्था छ, यो विभागको कार्य पहिले जस्तो मात्रै छैन ।’ उहाँले आफूले मन्त्रालयको सचिवको नाताले विभागको महानिर्देशकसंग कार्यसम्पादन सम्झौत गर्ने उल्लेख गर्दै विभागको महानिर्देशकले डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरुसंग सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरी शर्माले राम्रो समन्वय भएको ठाउँमा काम भएको बताउनुभयो । उहाँले समस्या भएपछि काम पन्छाउने बानी रहेको भन्दै समस्या संगै समाधान हुने पनि बताउनु भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सह सचिव सम्भु केसीले सरुवाको विषय तुरुन्तै टुंग्याउन सके थप १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च बढी हुने दावी गर्नुभयो ।